Badbaadada Dimuqraadiyada Xarku galey iyo Baahida Xisbi Qaran oo 4-aad! |
Badbaadada Dimuqraadiyada Xarku galey iyo Baahida Xisbi Qaran oo 4-aad!
Macadka “International Crisis Group” ee saldhigiisu yahey magaalada Brussels, Xarunta Midowga Yurub ayaa maqaal oo u soo saartey bishii March 5-dii ku soo bandhigey faalo dheer oo ka hadlaysa guulihii Somaliland ka gaadhey dhanka dimuqraadiyada, nabadgelyada iyo horumarka dhaqaale. Faaladan ayaa sidoo kale laguu soo bandhigey carqaladaha maanta hortaagan dhisida Qaran Casri oo ka hanaqaada Mandaqada Geeska Afrika, ee dunida inteeda badan ugu suntan Goob xasilooni daro, burbur dhaqaale iyo dawlado fadhiid ah aafeeyeen. Waxaaney Macadku warbixintiisa ku yidhi: «Somaliland’s hybrid system of tri-party democracy and traditional clan-based governance has enabled the consolidation of state-like authority, social and economic recovery and, above all, relative peace and security but now needs reform»
Haddaba marka maaqalkan, oo ka kooban 23 bog fariimaha u xambaarsan la fiiriiyo, muxuu noqon karaa isbedelka siyaasadeed ee shacabka Somaliland u heelanyihiin maanta, si ay himiladooda fog u gaadhaan. In badan ayaa dhegaha shacabku maqleen xisbiyada Mucaaridka iyo xisbiga maanta talada Dalka haya (markii uu mucaaridka) oo ku doodaya in Somaliland u baahantahey isbedel Siyaasadeed, iyagoon marnaba cadeyn nooca u yahey isbedelka ay marwalba sheegaan.
Maanta, oo xaalada Siyaasadeed ee dalku mareyso kala-Guur, waxay ila tahey in isbedelka Somaliland u baahantahey saldhig u noqdo Distoorka 15 jirsadey oo dhamaantii dib u eegis mugleh lagu sameeyo, lana qabyo tiro. Distoor Dal oo dib u habeyn lagu sameeyaa mahaa arrin dhib yar, waayo waxey u baahantahey maal faraban, wacyigelin badan, shacabka oo aragtiyadooda la ururiyo iyo khuburo ku xeeldheer arrimaha Distoorka oo la hawlgeliyo. Haddii aynu isbedelada loo baahanyahey ka soo qaadano qodobka ugu muhiimsan ee u baahan in Distoorka lagu daro, waxey ila tahey in tirade Xisbiyada Qaranka la kordhiyo, laguna daro Xisbi 4-aad, doorashada Madaxweynahana laga dhigo laba wareeg, tiiyo wareega hore yahey isreebka kowbaad, wareega labaadna isku soo hadhaan labada murashax ee ugu codka bata, halkaasna ku guleysto murashaxa hela codka muwaadiniinta ee badnaashaha Buuxa(Absolute Majority, 51%).
Marka shacabka Somaliland isku waafaqo in Xisbi Qaran oo 4-aad baahi loo qabo, waxaa mudan in la isweydiiyo maxey yihiin faa’idooyinka siyaasadeed ee u soo kordhin karaa Xisbi Qaranka oo 4-aad? Halgan dheer kadib, shacabka Somaliland, bishii may 18-dii 1991, shirkii Magaalda Burco ka dhacey wuxuu ku go’aansadey in u Qaran madaxbanaan noqdo, isagoo qaatey nidaamka dimuqraadiga ah ee wadamo badan oo Dunida ah isku maamulaan. Iskastoo nidaamka dimuqraadigu noocya badan yahey, haddana Somaliland waxey qaadatey nidaamka la yidhaa “ Presidential Regime”. Nidaamkaa oo ah in awooda ugu sareysa shacabku u igmado Madaxweyne iyo Ku-Xigeenkiisa oo doorasho xor iyo xalaal ah lagu doorto. Somaliland way ku nagaadey nidaamkaa lagu soo doortey labadii Madaxweyne ee u dambeeyey ee Dalka soo xukumey(Daahir Riyaale Kaahin iyo Axmed Maxamed Maxamuud), kadib markii Distoorka aynu maanta ka hadlayno lagu ansixiyey afti dadweyne muddo haatan laga joogo 15 sanno. Maadama Somaliland qaadatey nidaamka Madaxweynaha toos shacabku u doortaan, waxaa maanta mudan in shuruucda nidaamka la qaatey si dhab ah loo dhameystiro, laguna cadeeyo Distoorka dalka. Shuruucda ugu muhiimsan ee nidaamkan leeyahey waxa kow ka ah, in Madaxweynaha la caleema saaraa ku soo baxo cod shacab oo aqlabiyad ah, taas oo macnaheedu yahey in saamiga u Madaxweynuhu ka helay codbixiyaasha uu noqdo 51%. Marka la fiiriyo doorashadii Daahir Rayaale Kaahin iyo tii Axmed Maxamed Maxamuud ku guleysteen, midina ma waafaqsana Nidaamka ay Somaliand qaadatey wayo midkoodna ma helin aqlabiyada Codbixiyasha(51%). Waxaana la odhan karaa waa sababaha ka midka ah in Madaxweyne kasta oo talada dalka qabtaa u mucaaridad xoogan la kowsado, maadama aanu heysan aqlabiyadii codbixiyaasha, 51%. Faa’idaaoyinka kale ee Xisbi Qaran oo 4-aad soo kordhin karo waxaa ka mid ah in bulshada Somaliland oo maanta u badan dhalinyaro ay ku soo dhiiradaan ka qeybgalka saaxada siyaasadeed ee wadanka maadama ay xulashadoodi korodhey. Dhanka kale marka ololoha doorashada la galo waxa hubaal ah in ereyada xanafta leh, shaqsi dhaleycaynta iyo gefkuba yaraadan oo ololaha lagu galo dhowrsanaan, waayo murashax kasta wuxuu maanka ku haynayaa in ay adagtahey guusha oo uu hantiyaa wareega kowbaad. Marka wareega labaad loo gudbo, labada murashax ee ugu codka yar waxa u furnaan doonta in ay codkii ay heleen iyo barmaamijkii ay wateen ka iibiyaan labada murashax ee wareega labaad u gudbey, dawlada sidaa ku timaadaana fuliso laba barmaamij, iyaado heysata aqlabiyad ay ku fuliso hawlaheeda, waana faa’idooyinka laga dhaxli karo nidaamka doorasho ee labada wareeg ah. Nidaamka doorasho ee noocaas ah waxa kale oo u xakameyn karaa saameynta qabayaaladu ku leedahey siyaasada dalka maadamna muwaadin kasta fursad u heley in u codkiisa kobaad siiyo xisbiga u doono, tiiyo gorgortanka siyaasadeed ee wareega labaadna ku koobnaan doono xisbiyadii loo codeeyay, muwaadinkuna halkaas ku helo fursad labaad oo ku codeeyo.
Maanta marka xaalada Siyaasadeed ee dalka loo kuurgalo waxa muuqata in muwaadiniin badan saluug ka muujinayaan hab-dhaqanka 3-da Xisbi Qaran ee jira. Dhalinteena maantana, waa hubaal in ay ku jiraan rag karti, garasho, aqoon, iyo daacadnimo leh ay ku abuuri karaan qorshe iyo barmaamij siyaasadeed oo dalka u horseeda horumar dhinac walba ah.
Murashaxa ku dhiirada in uu barmaamijkiisa siyaasadeed ku darsado kordhinta Xisbiyada Qaranka, waxa marag ma doon ah in uu codbixiyaal badan kasban doono.
Waa Bilaahi Towfiig.
Maxamuud-Yaasin Cabdillai Ciro.